Abenzi base China Formamide kunye nabathengisi | Ngokunyaniseka
Ifomula yeMolekyuli: CH3NO
Ubunzima beMolekyuli: 45.04
Inombolo ye-CAS: 75-12-7
ulwelo olungenambala, ukungcola okungaboniyo
Ukucaca, ulwelo olungenambala kunye nephunga le-ammonia-njengobuthathaka.mp2.55 ° C, bp210-212 ° C (ukubola okuyinxalenye eqala nge-180 ° C), inqaku le-154 ° C, indawo eyi-1.1334 (20 ° C). Yinyibilika emanzini nasetywaleni, inyibilike kancinci kwi-benzene kunye ne-ether, njl njl.
I-Formamide yinto yokuhlanganisa amayeza, i-spicery kunye ne-dyestuffs.Isetyenziswa njengesixazululo sokwenza ifayibha yokusonta, ukuveliswa kweplastiki kunye nemveliso ye-inki ye-lignin njlnjl, njenge-arhente yokunyanga iphepha, i-coagulation accelerator kwi-oyile yokomba kunye nakwimizi-mveliso yokwakha, njenge-carburant , i-glue softener kunye ne-polar solvent kwi-organic synthesis.
I-220kg ngegubu leplastiki le-200L okanye igubu lesinyithi (ngaphakathi kwetyhubhu) livalwe ngci kuthintela ekuphumeni nasekuchukumiseni amanzi.
Ngoku amandla ethu emveliso aya kuba nakho ukufikelela kwi-25000MT ngonyaka, sinokucwangcisa ukuthunyelwa kuwe ngexesha.
SineSatifikethi se-ISO, sinenkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho, zonke iingcali zethu ziingcali, zingqongqo kulawulo lomgangatho.
Sinokwenza iindlela zokuhlawula ezifanelekileyo ngokweemeko ezahlukeneyo zabathengi. Amagama amaninzi okuhlawula anokubonelelwa.
Egqithileyo ICyclopropyl methyl ketone
Okulandelayo: 1,2-diaminobenzene CAS: 95-54-5